Manchester United oo heshiis la gaartay tababaraheeda cusub ee ku meel gaar ah – Gool FM - Idman news
Manchester United oo heshiis la gaartay tababaraheeda cusub ee ku meel gaar ah – Gool FM
(Manchester) 25 Nof 2021. Manchester United ayaa heshiis la gaartay tababaraha reer Germany ee Ralf Rangnick, si uu ula wareego shaqada tababarka ee kooxda muddada soo socda, sida laga soo xigtay wargeyska BRITISH ATHLETICS, maanta oo Khamiis ah.
Wargeyska ayaa sheegay in heshiiska Man United iyo Ralf Rangnick uu ahaa in macalinka reer Germany uu si ku meel gaar ah ula wareego tababarka kooxda muddo lix bilood ah, wuxuuna intaas kaddib qaban doonaa shaqada la talinta ee kooxda labo sano oo dheeri ah.
Rangnick ayaa ku dhow inuu soo afjaro qandaraaska uu kula jiro kooxda Ruushka ka dhishan ee Lokomotiv Moscow, kaasoo uu kaga shaqeeyo agaasimaha kubada cagta, waxaana uu shaqada maamulka iyo latalinta ka qaban doonaa garoonka Old Trafford laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda, 2021-2022.
Tani waxay ka dhigan tahay in maamulka Red Devils uu sii wadi doono raadinta tababare joogto ah, si uu ula wareego shaqada tababarka, iyada oo shaqada uu sii wadi doono Ralf Rangnick ilaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedka.
Si kastaba ha ahaatee, Kooxda reer England ayaa shaqada ka ceyrisay tababaraheedii Ole Gunnar Solskjaer, horaanta todobaadkan kaddib markii ay kooxda gashay natiijooyin xun oo heer walba ah.
Waxaa xusid mudan in Rangnick uu si guul ah kaga soo shaqeeyay hada kahor doorka la talinta kooxaha Red Bull Salzburg iyo RB Leipzig.
Rangnick ayaan awoodi doonin inuu hoggaamiyo kooxda Manchester United kulanka Chelsea, sababa la xiriira inuusan heysan warqada ogolaanshaha shaqada ee England.
Previous Robert Lewandowski oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu wanaagsan sanadka ee IFFHS… (Yuu ku garaacay?) – Gool FM
Next Zinedine Zidane iyo Paris Saint-Germain oo ku heshiiyay go’aan wadajir ah – Gool FM